Ny Faritra Mando Lehibe Indrindra Arovana Erantany Napetrak’i Bolivia · Global Voices teny Malagasy
Ny Faritra Mando Lehibe Indrindra Arovana Erantany Napetrak'i Bolivia
Voadika ny 22 Marsa 2013 9:09 GMT
Ao anatin'ny Fifanarahana Ramsar, nanendry faritra mando telo vaovao ny governemanta Boliviana ho isan'ny faritra arovana any ‘Llanos of Moxos’, faritra iray midadasika ao amin'ny faritanin'i Beni izay faritra mando arovana sy lehibe indrindra erantany amin'izao fotoana.
Manazava ny Positive News fa ity faritra arovana ity dia manome “ny haben'i Pays-Bas sy Belzika mitambatra.”
Ny Fifanarahan'i Ramsar dia diso fantatra loatra amin'ny maha-Fifanarahana momba ny Faritra Mando azy (Ramsar, Iran, 1971). Nofaritana ho toy izao:
[…] fifanarahana iray ifanaovan'ny samy governemanta, izay porofo hita vatana amin'ireo fanekena nataon'ireo firenena mpikambana ao aminy hitahiry ny endrika ekolojikan'ireo Faritra Mando Manan ny Lanjany Ho an'izao Tontolo izao sy hametraka rafitra ho “fampiasàna araka ny tokony ho izy” azy ireny, na fampiasàna maharitra, izay faritra mando rehetra hita ao amin'ny taniny.
Tsy tahaka ireo fifanarahana erantany momba ny tontolo iainana, tsy ao anatin'ny rafitry ny Firenena Mikambana momba ireo Fifanarahana Iraisampirenena Momba ny Totnolo iainana ny Ramsar.
Ilay Amerikana bilaogera, David Mixner, dia midera ilay fanondroana ary koa mizara ny vaovao ho an'ireo mpamaky avy any Amerika Avaratra :
Amin'ireo vaovao lehibe mikasika ny tontolo iainana erantany, natsangana ao Bolivia ny faritra mando midadasika indrindra eto an-tany. Mitovy habe amin'ny Dakota Avaratra ilay faritra arovana! Akaikin'ny sisintanin'i Proa sy Brezila ilay faritra ary tena ain-dehibe ho an'ny fahasalaman'ny Amazôna.
Ilay ONG iraisampirenena World Wildlife Fund dia mamaritra ilay faritra ho :
San Ignacio de Moxos. Sary nozarain'i Viaje al corazón de Bolivia tao amin'ny Flickr (CC BY 2.0) ….
Ny Llanos de Moxos, hita any akaikin'ny sisintanin'i Bolivia, Brezia sy Pero, dia fitambaranà kirihitra trôpikaly miaina haintany sy tondradrano miverimberina. Ireo faritra mando ireo dia nomena lanja manokana noho ny harena natoraly samihafa ao aminy: karazam-biby mampinono miisa 131 hatreto no voarakitra, 568 vorona isan-karazany, 102 biby mandady, 62 biby anaty rano, 625 trondro ary raha kely indrindra dia karazan-javamaniry 1.000 isa. Karazany betsaka – ahitàna ‘loutre’ goavana be sy ‘dauphin’ Boliviana miaina anaty ranomamy – no hita fa marefo, tandindonin-doza na mila ho lany tamingana.
Mauricio Pacheco de Diversidad entre Pendientes, bilaogy Boliviana iray momba ny olan'ny tontolo iainana, dia mankasitraka [es] ny dingana vitan'ny manampahefana Boliviana :
Sumados a los otros ocho sitios designados desde 1990, Bolivia se convierte en el país que ha protegido, bajo este esquema, una mayor cantidad de territorios.
Miaraka aminà toerana valo hafa voatondro efa hatramin'ny 1990, dia i Bolivia no lasa firenena manana faritra arovana lehibe indrindra amin'io sehatra io.
Sady niarahaba ny fivoahan'ilay vaovao, ny ONG iraisampirenena World Land Trust mitanisa an'i Bennett Hennessey, tale mpanatanteraky ny ONG Boliviana Asociación Armonía, milaza hoe:
“Dingana iray tena manana ny lanjany ho amin'ny fitehirizana ny nahazoan'ny faritra Llanos de Moxos fankatoavana iraisampirenena. Faritra iray tena zara raha nohalalinina izy ity izay mitahiry karazan-javatra mampiavaka azy manokana, manana ny maha-izy azy nefa tandindonin-doza mila arovana,” […]
“Saingy,” hoy izy manampy, “zava-dehibe ny anamarihana fa ny fanondroana faritra iray ho Ramsar dia dingana iray fotsiny ihany. Ilaintsika maika ny manohy ny ezaka fiarovana eny an-kianja mba hahafahana miaro ireo faritra tena tandindonin-doza.”
Any ambanimbany kokoa amin'io lahatsoratra anaty bilaogy io, i Mauricio Pacheco de Diversidad entre pendientes dia mizara [es] fomba fijery iray miaty fanakianana :
Quiero ser optimista y pensar que en un futuro, ya no se permitirán los avasallamientos en el TIPNIS, en el Parque Carrasco, en el Amboró, en el Madidi, en el Cotapata. Quiero creer que se realizará una verdadera planificación de la producción en las laderas y los humedales, y que se integrará realmente a todos en esa planificación. Sobre todo, quiero creer que se entenderá la protección, no desde el cálculo político habitual, sino desde los beneficios enormes que aporta. La importancia que tiene para regular los sistemas hídricos del sudoeste de la amazonia, para mitigar los efectos del cambio climático, y garantizar los recursos productivos de las zonas agrícolas y ganaderas más importantes del país, y por tanto nuestra seguridad alimentaria.
Te-hanam-panantenana ihany aho ka hihevitra hoe amin'ny hoavy dia tsy hisy intsony ny famelàna ny fitsofotsofohana tsy nahazo alàlana any amin'ireo faritra toy ny TIPNIS, ny Carrasco Park, ny Amboró, Madidi, na Valan-javaboaharim-Pirenena Cotapata. Te-hino aho hoe hisy drafitra iray ho fampivoarana ireo faritra kisolasola sy mando, ary ny tsirairay dia tena ho tafiditra tokoa ao anatin'izay drafitra izay. Ambonin'ny zavatra rehetra, te-hino aho hoe mba ho takatry ny rehetra ny asa fitehirizana, tsy hoe eo ambanin'ny kajikajy politika fotsiny, fa mba ho avy amin'ny tombontsoa goavana entiny. Faran'izay manan-danja izy io ho an'ny rafitra famatsian-drano ny faritra any Atsimo-Andrefan'ny Amazôna, mba hanalefahana ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro sy hiantohana ny loharanom-pamokarana ho an'ireo faritra manao asa fambolena sy fiompiana ao amin'ny firenena, ary isan'izany ny fahazoana antoka ny sakafontsika.
Nizara ity lahatsary [es] 8-minute manaraka ity ny WWF Bolivia mikasika ireo faritra mando ao Bolivia, amin'ny fanasongadinana ny faritra mando ‘Llanos of Moxos’ sy ny lanjan'ny fitehirizana azy ity :